MADAGASIKARA SY EOROPA
Naneho ny heviny ny repoblika federalin’i Alemana avy amin’ny alalan’ny masoivohony eto Madagasikara.
Sahina gazety ankehitriny ny milaza fa izaho kandida babakoto, hoy ny kandida ho filoham-pirenena Tabera Randrianarisoa. Hanaiky izany veny havako ? Sao dia mba efa tafahoatra ilay fanevatevana, hoy ny kandida Tabera.
LEHILAHY MATY AN-DALANA
Raim-pianakaviana iray antsoina hoe Tava Velin manodidina 40 taona eo no maty tampoka teny andalana tao Sambava.
LASA JIOLAHY NY MPITANDRO NY FILAMINANA
Fa inona no mahazo ny mpitandro ny filaminana ? Ny polisy etsy Tsaralalàna manafika, ny miaramila etsy amin’ny Capsat novonoin’ny polisy fa nandroba,
Tontosa omaly hariva teny Iavoloha ny dinika ara-politika teo amin’ny fitondrana Malagasy sy ny vondrona eoropeana.
Hamoaka ny tapany voalohany amin’ny fanampiana ara-bola ho an’ny tetibolam-panjakana ny Vondrona Eoropeana ka mitentina 13,5 tapitrisa euros izy io. Izany dia noho ny ezaka nataon’ny fanjakana malagasy eo amin’ny lafiny fanavaozana sy ny fandaminana ara toe-karena na dia teo aza ireo loza voajanahary nifanesy teto Madagasikara.Samy niaiky ny maha zava-dehibe ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangaraharaha ary tsy misy fanilikilihana amin’ny 2018 ny vondrona eoropeana sy ny fitondram-panjakana Malagasy, raha ny resaka omaly ary nilaza ny hanolotra vola 3,7 tapitrisa euros hikarakarakarana ny fifidianana ny eoropeana.Vonona ihany koa izy ireo hanampy an’i Madagasikara amin’ny fametrahana fitsarana marina sy moderna kokoa ary mahaleotena mba hahafahana manatsara ny ady amin’ny kolikoly.Tsy maintsy tafapetraka eto ny Pôle anti-corruption sy ny Haute Cour de Justice afaka hitsara ireo mpitondra ambony hoy kosa ny filoham-pirenena .
Tsy mitovy ny filazàn'ny kaoperativa Cotisse sy ny tatitry ny zandary momba ny isan'ny maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tao Bemalandy ny alin'ny zoma teo. Ny voalohany milaza fa iray no namoy aina ary izany dia araka ny tatitry ny zandary, hoy ny fanambaràna ofisialin'ny Cotisse. Ny zandary kosa anefa dia nizara vaovao ny alahady teo ary nilaza fa telo no namoy ny ainy tamin'ny mpandeha miisa 13.
Betsaka ny mpandeha taxi-be mitaraina amin'izao fotoana ankatoky ny fety izao fa tsy tonga eny amin'ny fiantsonana farany ny fiara mitondra azy ireo dia miverina, nefa saran-dàlana feno hatrany no takiana. Endrika fanararaotana ankitsirano ny mpanjifa izany ary voamariky ny fitarainana fa bus mampitohy an'Ambatobe no tena mpanao izany tato ho ato.
Mitety orinasa fanaovan-gazety ny talem-paritry ny minisiteran'ny serasera ary manery an-kolaka ny tompon'andraikitra mba hanome lisitry ny mpanao gazety azy. Miaraka amin'ny taratasim-panjakana izy manao izany. Dia mbola hisy hiteny ihany ve, manoloana ny zava-misy fa tsy misy fitsabahan'ny fanjakana amin'ny fanomezana karatra ny mpanao gazety?
olona 3 no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga omaly hariva teny amin’ny Polisy-Ivato. Fiara sprinter 1 niala mpianaka niampita arabe no nifatratra tamina fiaran'olontsotra. Niforitra tanteraka ity fiara ity, izay tsy nisy olona tao anatiny. Tsy nisy ny aina nafoy fa ireto olona 3 teo amin’ny “taxiphone” no naratra, ary nisy mihitsy ny vaky loha. Tapaka ny tanan’ilay mpamily.10 minitra taty aoriana no tonga ny zandary avy ao Mandrosoa.
Karana iray namono olona roa tamin'ny fiara nentiny, teny amin'ny RN5 mifanandrify amin'Ambalamanasy. Nitsoaka izy rehefa voadona mafy ny moto teo anoloany izay nitondra lehilahy roa izay maty tany amin'ny hopitaly. Hita ihany ny nisy ilay karana satria nisy nahita ny laharan'ny fiarany. Ny olana dia lasa mifandrirotra indray ny polisy sy zandary ao an-toerana, samy te-hanao ny fanadihadiana ilay karana.
Notetehin'ny jiolahy tamin'ny antsy izy mivady izay mitazona Bar ao Antetezatona-Toamasina. Efa-dahy mitam-basy sy antsy no nanafika. Tsy nananana antra izy mivady ary nalaina ny vola sy ny fitaovana sasantsasany, toa ny finday sy ny décodeur. Mbola miady amin'ny fahafatesana ao amin'ny hopitaly ao an-toerana izy mivady.
Nivezivezy ny helikoptera roa omaly nankany Ikongo ary nankao Fianarantsoa. Notaterina avokoa ireo mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ny fitsarana (filohan'ny fitsarana sy ny tonia mpampanoa lalàna), ary koa ny mpiandry fonja. Niampy ny kamiao feno mpitandro filaminana any an-toerana. Raikitra izany ny fampandrian-tany, mifanohitra amin'ny filazàna hoe efa milamina.
Nofefen'ny miaramila serza iray ny toerana misy ny tohodrano izay mamatsy ny tanimbarin'ny Bekongo. Raha nanao fihetsiketsehana ny olona ny alatsinainy lasa teo dia nambanany basy ary nosamboriny izay mafimafy loha. Lehilahy roa no nadobony am-ponja taorian'ny fitoriana. Mitaraina ny olona noho ny fanaparam-pahefana ataon'ity miaramila ity.
“Mangataka vonjy izahay mba hanampy anay fa mafy ny ady atrehina”, hoy ny mpino ao amin’ny FJKM any Antsohihy. Efa nalefa tany amin ny FJKM Foibe koa ny fitarainana. Misy karana iray haka an-keriny ny fananan'ny FJKM. Nisy ny hetsika fanairana nataon’ny fiangonana omaly. Raha tsiahivina, tany novidiana misionera iray tamin’ny taona 1994 ity tany ity ka natolotra ny SG FJKM. Izao indray misy karana milaza ho tompony.
Niantso ny mpivarotra hidina an-dalambe ny depiote Mamangy Norbert omaly noho ny famotehana ny tranoheva sy fanilihana mpivarotra efa an-taonany. Efa niatrana am-bava basy kosa ny avy amin’ny EMMOREG, izay ampiasain’ny olona ambony HVM any an-toerana hamoritra vahoaka.
Rehefa avy nianatra 8 volana tao amin'ny IFProG nanaraka fiofanana momba ny zaitra sy lamaody ireo ankizy monina tao amin'ny boriboriboritany I eto Antananarivo renivohitra dia nandray maripakasitrahana sy “Certificat” ankatoavin'ny fanjakana. Ny Solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa no niantoka manontolo ny sarampianaran'izy ireo sy ny kojakoja rehetra nilaina tamin'izany. Faly izy ireo fa nitombo fahalalana ka afaka mitady asa na miasa tena na koa manangana orinasa kely. Mankasitraka ny Me Hanitra nitsinjo ireo sahirana ireo. Tsy nanome trondro fa harato ahafahana miasa.
Hampitomboina ny isan’ny zandary hiantsoroka ny fampandriana fahalemana eto Analamanga mandritra ny vanim-potoanan’ny fety, hoy ny lehiben’ny Emmoreg, Kolonely Ravoavy Zafisambatra. Tafiditra ao anatin’ny ampahany voalohany amin’ny programa andiany faharoa momba ny fanampiana ara-bola ho an’ny taona 2017-2018 izy io, ary mifandraika amin’ny fifanarahana faharoa momba ny fanamafisana sy ny tosika ho an’ny asan’ny fanjakana Malagasy na ny SBC2. Famatsiam-bolan’ny FED andiany faha-11 izy ity.
Lehilahy iray no nisandoka ho mpanao gazety mba hahafahany niditra tao amin’ny “violon” ao amin’ny Commissariat central Mahajanga. Nanaraka ny havany tra-tehaka nifoka rongony ka voasambotry ny polisy moa izy ary mody naka sary. Nosamborina afak’omaly ary nampidirina “violon” ihany koa ilay mpisandoka ho mpanao gazety io, izay hatolotra ny fitsarana aorian’ny famotorana.
Nanolotra fanomezana ho an’ireo mpiara-miasa aminy ny minisitra Neypatraiky Rakotomamonjy, mba hanampiana azy ireo amin’ny fiatrehana ny noely sy ny faran’ny taona.
« Araka ny toromariky ny filoham-pirenena, dia atao laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Mifanandrify amin’izany, dia nanamafy misimisy kokoa ny asa sosialy ny eto anivon’ny MPTDN.
Porofon’izany ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ireo zanaky ny mpiara-miasa sy EPP sasantsasany teto an-drenivohitra vao tsy ela izay. Anio, ho fanohizana dia tolorana vary sy menaka ary siramamy ireo mpiara-miasa mba ahafahan’ny tsirairay miaina fety finaritra sy hanamaivanana ny fandanian’izy ireo amin’izao ankatoky ny fety sy faran’ny taona izao », hoy ny minisitra. Tsy izay ihany fa notolorana valopy fankasitrahanan ihany koa ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka, fo fankasitrahana ny ezaka nataon’izy ireo nandritra ny taom-piasana izany.
Tra-tehaky ny polisim-pirenena ao Ambalavao ny herinandro lasa teo ny lehilahy iray anisan'ny mampikaikaika ny mponina amin'ny asan-dahalo. Tamin’ny 3 aogositra 2017 dia nisy mpividy omby avy any Mahasoabe kaominina ambanivohitra Ambalavao nividy omby tao Ambalavao. Notafihin’ny dahalo izy ireo rehefa tonga tao Mahaditra, ka lasa ny omby 14 novidiana. Raikitra ny fanarahan-dia notarihin’ny miaramila, ka nisy fifandonana izay nahalavo ny miaramila iray. Afaka nilefa daholo ireo dahalo fa ny omby no tavela. Nalefa teo am-pelatanan'ny polisim-pirenena tany an-toerana ny raharaha ka raikitra ny fikarohana. Tratra tamin'izany ny iray tamin'ireo dahalo ireo ny alarobia lasa teo, ary niaiky fa anisan'ireo valo lahy ireo.